Kuyini ukuqinisekiswa kwe-imeyili? Kukuthinta kanjani ukulethwa? | Martech Zone
Kuyini ukuqinisekiswa kwe-imeyili? Kukuthinta kanjani ukulethwa?
NgoLwesihlanu, Novemba 14, 2014 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 Douglas Karr
Kunokungazi okuningi laphaya okuvela kubakhangisi nakuchwepheshe be-IT uma kukhulunywa ngokulethwa kwe-imeyili nokubekwa kwebhokisi lokungenayo. Izinkampani eziningi zikholelwa nje ukuthi inqubo elula lapho uyithumela khona i-imeyili… futhi ifika lapho idinga ukuba khona. Akusebenzi ngaleyo ndlela - abahlinzeki bezinsizakalo ze-intanethi banamathuluzi amaningi abanawo wokuqinisekisa umthombo we-imeyili futhi bawuqinisekise njengomthombo ohloniphekile ngaphambi kokuba leyo imeyili ithunyelwe ebhokisini lokungenayo.
Simangele ngokuthuthuka kokulethwa kwethu, ukufakwa kwebhokisi lokungenayo, kanye nokusebenza okulandelayo kwamasu ethu we-imeyili kusukela sisebenzisa Ukubekwa kwebhokisi lokungenayo le-250ok ukuqapha, ukuvinjelwa kohlu lwabamnyama kanye nokuxazulula inkinga Lokho kuhlobene ngqo nembuyiselo esithuthuke kakhulu ekutshalweni kwemali kohlelo lwethu lokuthengisa nge-imeyili.
Kuyini ukuqinisekiswa kwe-imeyili?
Ukuqinisekiswa kwe-imeyili kuyinqubo abahlinzeki bezinsizakalo ze-inthanethi (ama-ISPs) abaqinisekisa ngayo ukuthi ama-imeyili avela kumthumeli ofanele. Iqinisekisa ukuthi umlayezo we-imeyili uqobo awushintshiwe, ugqekeziwe noma wenziwe ohambweni lwayo kusuka kumthombo kuye kumamukeli. Ama-imeyili angaqinisekisiwe ngokuvamile azogcina kufolda yogaxekile yomamukeli. Ukuqinisekiswa kwe-imeyili kuthuthukisa ikhono lakho lokuthi ama-imeyili akho alethwe kubhokisi lokungenayo kunefolda engenamsoco.
Ukuqinisekisa ukuthi unayo I-DKIM, I-DMARC futhi Amarekhodi e-SPF Ukufakwa kahle kungathuthukisa ukubekwa kwakho kwebhokisi lokungenayo - okuholela ngqo ebhizinisini eliningi. Nge-Gmail kuphela, kungaba umehluko phakathi kokubekwa kwebhokisi lokungenayo elingu-0% nokubekwa kwebhokisi lokungenayo elingu-100%!
Isifaki uhlanganise le infographic ekuqinisekisweni kwe-imeyili - kulula kakhulu ukuthi uGogo akuqonde!
Tags: ukuqinisekiswaukuhanjiswadkimI-DMARCukuqinisekiswa kwe-imeyiliukukhishwa kwe-imeyiliukubekwa kwebhokisi lokungenayoisihlungi se-junkugaxekilei-spf